Sida loo Download boor Music Effortlessly
> Resource > Music > Sida loo Download boor Music si sahlan
Gooldhalinta boor ayaa aad siin karaa waxyi badan doorashooyinka song. Inkasta oo baadhitaan gooldhalinta ee majaladda, waxa kale oo aad isticmaali kartaa in ay website-billboard.com, halkaas isugu soo diyaariyeen ballaaran ku jira waxaa lagu soo bandhigaa, oo ay ku jiraan gooldhalinta, wararka music iyo wax ka badan. Waa maxay dheeraad ah, marka laga reebo arkaysid gooldhalinta music ah, waxaad sidoo kale ka ciyaari kara music via Spotify, MySpace ama Rdio. Laakiin waxa aad sameyn doonaa haddii aad soo gaarto song weyn oo u baahan ba'an? Ha madaxa aad ku xoqin mar dambe iyo xal weyn u hesho halkan. The Wondershare Streaming taariikhqorihii Audio soo bixi kartaa music boor duubista, iyadoo aan loo eegayn waxa madal music la ciyaarayo. Bal aan waqti lahayn. Raac tutorial ah oo faahfaahsan hoose oo u tijaabiso.
1 Ku rakib this boor music downloader
Download barnaamijkan ka link dajinta oo ku xidh on your computer. Waxaa jira laba nooc kala horreeyaan for Windows iyo Mac. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah in ay ku haboon aad PC ama Mac.
2 Download music ka boor
Burcad barnaamijka dib markii la rakibey. Waxaad aan ka maqnaan karaa weyn Record button ee bidixda xagga kore. Riix badhanka, oo markaas waa inay billboard.com in la helo heesaha aad jeceshahay. Marka aad gujisid mid song inuu u ciyaaro, barnaamijka ku bilaaban doono si ay u qoraan music ka boor isla markiiba.
The songs soo bixi yihiin oo dhan MP3 files oo lagu ciyaari karo in ku dhawaad ​​dhamaan ciyaartoyda warbaahinta. Raadi songs ee Library tab iyo iyaga doortaan. Markaas riix Add Lugood in badhanka hoose. Ka dib markii in, heesaha waxaa loo wareejin doonaa Lugood iyo bandhigay playlist SAR ah.
Fiiro gaar ah: Si aad u heshaan songs ee fayl deegaanka, waxaad dooran kartaa heeso ee Library iyo riix Folder icon dhow Add to Lugood button.
Samee ringtones: waa mid aad u fudud in la abuuro ringtone ka soo baxay oo track song jeceshahay. Guji ka Ring icon dhexe ee heesta iyo jar qayb ka mid ah bitmap in curiyo doonaa. Markaas badbaadin M4R ama file MP3 in ay u diraan si ay u telefoonada aad.
Edit macluumaad song: barnaamijkan si toos ah ka raadin kartaa oo kala soo bixi macluumaad song for tareenka. Haddii ay sidaa tahay aad rabto in aad wax ka bedel macluumaad heesta naftaada, waxaad riixi kartaa Edit icon in wax song ka dibna buuxin duurka tafatir ku khaanadda saxda ah.
Haddii aad rabto in aad muusiko ah boor aad warbaahinta ciyaaryahan mar walba iyo meel kasta, ha ka cabsan in download barnaamijkan u leedahay in isku day ah. Waxaad sii socotay inay u jeclahay.